I-Disc neDrum iyasebenza njani
Iimoto neekhekhi Ezisiseko
Qondani indlela abaSebenzayo ngayo kwaye Ziyintoni ezingcono
Ezi zimbini iintlobo zeebhuleki ezisetyenzisiweyo kwiimoto zanamhlanje zizikhefu zentambo kunye nekhefu lokugubha. Zonke iinqwelo ezintsha ziphethe iibhuleki kwi-front front wheels, ngelixa iivili ezisemva zingasebenzisa i-disk okanye i- drum brakes .
Iibhuleki zedivayi, ngamanye amaxesha zibizwa ngokuthi "disk" amabhuleki, sebenzisa i-rotor yecala edibeneyo, edibanisa i-disk ejikeleza ngevili. Xa iibhuleki zisetyenziselwa, i-caliper ixubha i- pake pads ngokubhekiselele kwidiski nje ngokuba unqanda i-disinfink disc ngokuyifinya phakathi kweminwe yakho, kwaye unciphisa isondo.
Idrake ibhayise isebenzisa isilinda evulekile evulekile ngasemva, efana nokubonakala kwidrama. Xa umqhubi ehamba kwi-pedal ye-brake, izicathulo ezibukiweyo eziphakathi kwidrama zixoshwa ngaphandle, zixubha ngaphakathi kwidrama kwaye zicotha ivili.
Ukwahluke phakathi kweeDiski neDrum Brakes
Iibhuleki zedivayili zibhekwa njengezigqwesileyo kwiibhuluki zembambano ngezizathu ezininzi. Okokuqala, ukuphulwa kwe-disk kwenza umsebenzi ongcono ukuchitha ukushisa. Ngaphantsi kokusetyenziswa kakubi, ezifana nokuyeka ngokukhawuleza okanye ukugibela ibhondi phantsi kwexesha elide, ama-brakes e-disk athatha ixesha elide kuneedrakeski ukuba alahlekelwe yimpumelelo, eyimeko eyaziwa ngokuthi "i- brake fade ." Iibhuleki ze-disc nazo zenza ngcono kwimozulu emanzi, ngenxa yokuba amandla e-centrifugal ajwayele ukuhambisa amanzi kwi-disc ye-brake kwaye igcine iyomile, kanti i-drum brakes iya kuqokelela amanzi ngaphakathi ngaphakathi apho izicathulo zokuqhawula zidibanisa iingqungquthela.
Kutheni Iimoto Ezininzi Zisebenzisa Iibhuleki ZaseDrans zangemva
Zonke iinqwelo ezithengiswayo eUnited States zisebenzisa i-disc brakes kumavili angaphambili, kodwa iimoto ezininzi zisasebenzisa iibhebhe ebusemva.
I-Braking ibangela ubunzima bemoto ukuba buye phambili; ngenxa yoko, malunga no-70% womsebenzi wenziwa ngamabhuleki angaphambili. Yingakho i-front brakes yakho idla ukukhawuleza. I-drum bherki ayinayo imali engabizi ngaphezu kwe-disc brakes, ngokuyininzi ngenxa yokuba banokuphindwa kabini njengendlela yokupaka indawo yokupaka, ngelixa iibhulaki ze-diski zifuna i-freake mechanism.
Ngokufaka ama-brakes e-dis ukuya kumavili angaphambili kunye neebhere kwiibhasi ezihamba phambili, abavelisi banokubonelela ngeyona ndlela ininzi yezibonelelo ze-disc brakes ngelixa ihlawule iindleko.
Nangona kunjalo, imoto eneebhuleki zediski kumabini angaphambili nasemacaleni angemuva izakubonelela ngokugqithiseleyo ukusebenza kwemozulu emanzi kunye nexesha elide. Ngokuqinisekileyo, akufanele ugibele iibhuleki zakho xa ugxotha ixesha elide. Kunoko, phantsi kwe-downshift uze uvumele injini ilawule isivinini somoto.
Indlela Yokuxelela Ukuba Imoto Yakho Ikhuphe okanye Iibhereki Zomgqomo
Ukuba imoto yakho yakhiwe kwiminyaka engamashumi amathathu edlulileyo, kunokwenzeka ukuba inamabhuleki kwi-front front wheels, kodwa ingaba nemidumba emva. Ukuba imoto inamagumbi anezikhulu ezivulekileyo, unokukwazi ukubona ezinye okanye zonke iindibano zebhekile. Ukubonwa ngamavili, i-disc bherk i-rotor esicatshulwayo iphinda iphinde ivela ngaphakathi kwiphepha kunye neqhekeza elibanzi (i-caliper) ngaphambili okanye ngasemva kwediski. Iibhereki zedrum zinegubhu elincinci elitsho lihlala lijikeleza ngaphakathi kwiphepha.
Indlela yeTwin-clutch Transmission Works
Ukulungisa iiTire eziTyebile ngeCan
Indlela ye-Mercedes-Benz BLUETEC System Works
Indlela Abahamba NgamaBrace Work Work
Izixhobo zokuPhathwa ngokuzenzekelayo: i-Ratchet Extensions
Ulawulo lwe-Electronic Stability Control (ESC)
Iifomati zeNtetho ze-Italian Definite
I-CRITIC: Ukufunda ukuHlola amaBango
"I-Treehouse of Horror" Imifanekiso
Amagama omntwana aseCeltic kumantombazana
IsiGulana sezonyango kunye nesigama samayeza
Ngaba Unokulinganisela i-Egg kwi-Equinox?
UMike Tyson - I-Re-by-Fight-Record
Ndingaphila KwiNdlu kaFrank Lloyd Wright?
Imbali yamandulo yaseSiriya, iMbali kunye neGiology
I-Satsuma Uvukelo: iMfazwe yeShiroyama